Akụrụngwa kacha mma 5-50KG Animal Feed Pet Granule Packing Machine Manufacturer and Supplier | AHO
Animal ndepụta Granule mbukota Machine
Ọ bụrụ na e nwere a “ọdịnala” ngwaahịa na ogologo na ihe ịga nke ọma akụkọ ihe mere eme nke ụlọ ọrụ GAOGEPAK, nke ahụ bụ n'ezie nri anụmanụ; dịka eziokwu, ahịhịa nkwakọ ngwaahịa anyị esoro uto na mmepe nke mpaghara mmepụta a na mpaghara anyị na mbụ, mgbe ahụ na Italytali na n'oge a na ụwa dum, na-emeziwanye ma na-akwalite ahịrị akpa anyị ma na-echekwa mgbe niile dị ka onye njem anyị.
Pellets, mash, bran, granules, flakes, crushed, ngwaahịa a n'ụdị ya niile bụ ndị na-ebu nri anyị na-eri nri, Gross / N ma ọ bụ Net / N dabere na ikike a rịọrọ wee banye n'ime igwe akpa IGF anyị na-akpachapụ anya, ike nke na-arụ ọrụ na akwụkwọ, kpara polypropylene na Pee akpa sitere na site na 5 ruo 50 n'arọ ma rute ike ruo 1200 akpa / awa. Site na nri anụmanụ, usoro mmechi a na-emebu ga-akwa akwa.
Automatic 5-50KG Animal Feed Pet Feed Granule mbukota Machine ọ bụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị maka ịkwakọ ngwaahịa 5-25KG dị ka osikapa, ọka, ọka, agwa, nri, shuga, mkpụrụ, fatịlaịza wdg n'ime akpa emere.
The akpa ihe nwere ike ịbụ akwụkwọ akpa, Pee akpa, kpara akpa.
Automatic 5-50KG Animal ndepụta Pet Feed Granule mbukota Machine eji maka akpaka erikpu na mbukota maka granule ihe onwunwe n'ime nnukwu akpa si 10kg ka 50kg. Animal ndepụta mbukota igwe nke ejiri ihe silo, dijitalụ dijitalụ, ngwongwo akpa, na-ejuputa ngwugwu, na-ebute usoro yana ịkwa akwa. Mepụtara site na ụlọ ọrụ anyị iji dozie nsogbu nke ndị ọrụ na-adịghị adị, ụgwọ ọrụ dị elu na nkwụsi ike akwụkwọ ntuziaka na-arụ ọrụ maka granule ihe nnukwu akpa mbukota chọrọ. Anyị na-enye ụdi Checker arọ na robot palletizing usoro.
Nhazi otu: ihe silo, dijitalụ dijitalụ, sistemu ọkọnọ akpa, sistemụ ngwugwu, ịbugharị usoro yana sistemụ akwa
1 Igwe ahụ dị mfe ma kwụsie ike n'ihi na ọ na-akwado Siemens PLC na 10 inch inch touch screen in control part.
2 Pneumatic akụkụ adopts Festo solenoid, mmanụ- mmiri separator, na cylinder.
3 agụụ usoro adopts Festo solenoid, iyo, na digital agụụ mgbali mgba ọkụ.
4 A na-enye ngbanwe magnet na ihe ntanetịpụ na usoro ọ bụla na-agagharị, nke dị mma ma nwee ntụkwasị obi.
1 Akpaaka-atụtụ akpa usoro: Akpaghị aka bulie njikere akpa.
2 Akpa oghere, na-ejigide ya, na-ejide usoro akpa gị: Mepee akpaaka, jide ma dozie akpa ya.
3 Akpa akpa na usoro nnyefe: Akpa akpa na nnyefe akpa.
4 wingkwa Akwa akpa: Akpafe na-ebufe akpa na akpaaka ịkwa akwa (akpa akwa)
5 Ọdụdọ akara akụkụ: Kpamkpam achịkwa dum nkwakọ unit.
.Dị GW-450 GW-550 GW-650
Ngwa ndị dị granular （ezigbo mmiri mmiri)
Ogologo ịdị arọ 5 ka 50kg (10lb ruo 110lb)
Akpa akpa Kpara akpa, kraft akwụkwọ akpa, Pee akpa
Typedị akpa Otu akara akpa, M n'akpa uwe
Ọsọ 3 ka 16 akpa / min
Ihere temp -10 Celsius C ruo + 45 Celsius
Ọdụdọ 380V / 50Hz, 3phase ma ọ bụ ahaziri site na nkọwapụta
Nsogbu Ikuku & Oriri 0.7Mpa, 0.6 M3 ／ min
Akpa akpa (mm) L630-830mm x W 350-450mm L800-1000 x W450-550mm L 900-1100mm x W 550-650mm
Mbukota ibu (n'arọ) 10-20kg / akpa 25-30kg / akpa 40-50kg / akpa
Nke gara aga: Akpaaka 20-50kg Mịnye Nnukwu Bag Granule Bagging Packing Machine
Osote: Automatic Granule Plastic Pellet Open-ọnụ Bagging Machine
Akpaaka Big Bag Granule mbukota Machine
Cat Litter Automatic akpa igwe
Automatic Sand mbukota Machine Open-ọnụ Bag B ...